Indlela yokuzivikela ebudloveni basekhaya
Umndeni uvame ukuhlotshaniswa nento ethile, eyomphefumulo futhi efudumele. Emndenini, uthando, ukuhloniphana kanye nokuqonda kufanele kubuse. Okungenani, sihlale sithanda lokho, kodwa, ngeshwa, izifiso zethu ngezinye izikhathi aziyiqiniso.
Kwabesifazane abaningi, ukuphila komndeni wabo kufana nefilimu edidayo. Futhi isizathu salokhu udlame.
Isihloko sobudlova emndenini sijwayele abaningi, kodwa akubona wonke umuntu onesibindi sokukusho ngezwi. Sikulungele ukusungula izizathu eziningi zokuthi kungani kufanele sikhuthazele, kunokuthi "cha" kanye. Ngakho-ke, izibalo ezidabukisayo kakhulu, ngisho ne-akhawunti eningi ehlala ngemuva kwezigcawu. Njalo ngonyaka, abesifazane abaningi, ngendlela ehlukile, bahlukunyezwa ngokobudlova ngokokuziphatha noma ngokomzimba emndenini, ngesikhathi ilungu lomndeni eliba umdlwenguli alutholi ngisho nokulahla kahle futhi lithembisa ukwelashwa okunjalo. Into edabukisayo yukuthi abesifazane abaningi abazi nje ukuthi bangazivikela kanjani ebudloveni basekhaya. Mayelana nalokhu futhi ukhulume.
Beats - bese uyathanda.
Mhlawumbe, akekho owesifazane oyedwa owayengazi lesi saga samanga. Ukubhala kwakhe, kungenzeka ukuthi kungokwowesifazane, futhi konke kwasungulwa, lokho okungenani kwakuyokwenza ukuthi umyeni wakhe abe nesenzo sokubekezela. Kodwa kumagama kuphela, ngoba luhlobo luni luthando olungaba khona, uma ubuhlungu budilizwa?
Owesifazane ngokwemvelo ungaphansi komuntu onamandla angokwenyama, okuvame ukuba yisisusa sokuqala sokuhlukunyezwa nokusetshenziswa kwamandla, ukucindezelwa, ukuthobeka. Ukungakwazi ukukhuza, noma ukumane nje ukwesaba, kukhulisa kakhulu isimo. Ngokuvamile konke ukungenzi lutho kubangelwa inkulumo eyodwa: "kodwa lokho bekungeke kube kubi nakakhulu." Futhi kubi nakakhulu noma kwenzeka.
Ukubonakaliswa kobudlova emndenini kungase kube nemvelo ehlukile, futhi kube nengqondo, ngokobulili noma ngokomzimba. Kunoma yikuphi, ukulimala kuyingozi kakhulu. Kwanele ukucabanga ukuthi owesifazane ozwa ukwesaba, ubuhlungu, ukucindezelwa, nokuhlazeka angazizwa kanjani futhi aqale ukukholelwa ukuthi akekho muntu kulokhu kuphila, futhi konke okwenzekayo okuzungezile kuyimfanelo yakhe kuphela. Ngokuvamile, uma kukhona izingane emndenini womhlukumezi, maduzane ugugu lokubamba nokugcoba, lubafihla, khona-ke lona wesifazane uthatha kabili.
Okucasula kakhulu yilokho ngenxa ye "izimbobo" emthethweni futhi nje ukungazi kwakhe, umdlwenguli akakwazi ukuphendula ngezenzo zakhe.
Indlela yokubona umhlukumezi?
Ekuboneni kuqala ukuthi u-tyrant nomdlwenguli uzoba ngumuntu onobungane nomnandi, ohlale ekulungele ukusiza futhi angabangeli noma yikuphi ukusola. Ngokusho kwengqondo, ukuhlukunyezwa kuyaqhubeka kancane kancane, futhi kubonakala ngemva kweminyaka eminingana yokuhlala ndawonye. Ngokujwayelekile isignali yokuqala ukuthi umhlukumezi angase avele endlini akuvamile, kodwa ukungaqhubeki kokuthukuthela kwentukuthelo nokuthukuthela ngaphezu kwezicathulo, inkani eningi ngokweqile nokucasuka ngokuqondile lapho kubonakala kungalungile. Njengoba isibonakaliso sokwesaba kufanele sibe ukuziphatha okubi embusweni odakiwe. Phela, abadlwenguli abaningi bavame ukuthatha isenzo sophuzo oludakayo, futhi ekhanda elingenangqondo bazisola kakhulu ngalokho abakwenzayo. Ngokuvamile udlame lokuqala lubonakala, ukuthi ungasho kanjani "izenzo zokubekezela". Indoda phakathi kwempikiswano ingabamba ngesandla, isebenzise kabi, isebenze kalula, isebenzise amandla ezintweni ezifakiwe: kube kutafuleni, udonga, uphonsa izinto, uwaphule. Mhlawumbe ngeke kube yiminyaka embalwa, futhi ungaba into enjalo yokususa intukuthelo yakhe. Yiqiniso, akekho owayeluleka ukushiya abathembekile, kubalulekile nje ngenkathi kunesikhathi sokuqonda imbangela yalokhu kuziphatha futhi ungavumeli ukuphindaphinda esikhathini esizayo. Ungakwazi ngisho nokuhambisana nabahlukumezi abangaba khona kanye nabadlwenguli. Kukhona amadoda aqaphela ukuziphatha kwawo futhi azilungiselele ngokuzimela ukulwa nalokhu, intshiseko enjalo ayikwazi ukunqatshwa, kubalulekile ukusekela nokusiza ngazo zonke izindlela. Ngalesi simo sezindaba, maduzane uzoqonda ukuthi ungasusa kanjani ubudlova emndenini.
Njengoba sekushiwo kakade, izingane zivame ukulwa nodlame emndenini. Ngokuvamile, umama nje akakwazi ukuwavikela, noma yena ngokwakhe uyinto yokuxhashazwa. Ngokuvamile lokhu kwenzeka emindenini lapho owesifazane exhomeke kumuntu onemigomo yempahla nezindlu. Ngenxa yokungabi nanoma yikuphi okunye okunye, kufanele nje bakhuthazele, futhi bawenze babekezelele izingane, ngoba akukho ndawo ongaya kuyo.
Izingane ziyingxenye ebuthakathaka kakhulu bendawo yeliphi izwe, futhi njengoba bekusho, noma ubani angabacasula ingane. Ngokuvamile, ukuxhashazwa kwabantwana kusetshenziselwa abazali bobabili, uhlobo lwezimgomo zemfundo, bathi, ukwazi indawo yabo. Ngesikhathi esifanayo, bambalwa abantu abakhumbula ukuthi ingane, oye wahlukunyezwa, izoqhubeka nokuba yisisulu. Lokhu kuzothinta ubuhlobo eqenjini lokufundisa, ekukhulumeni neontanga, bese bekhulile. Le ndlela yemfundo yimbangela yokwakheka kobuciko obunjalo bokuziphatha kwengqondo. Ngokuvamile, lezi zingane zizilungiselela ukuzwa njalo ububili bezinzwa. Okuthinta ukuzethemba nokuzihlonipha kwabo. Ngisho nezingane ezivele zambona ubudlova zizobe sezikhona ukuphazamiseka kwengqondo, futhi esikhathini esizayo, zihlaziya okwenzekayo, zizizwe zisola ukuthi kwenzeke lesi sigameko, ngisho noma kungekho.
Uma uba yisisulu, futhi ungazi ukuthi ungazivikela kanjani ebudloveni basekhaya, isenzo sakho sokuqala kufanele siqaphele ukuthi wenza isenzo esinonya. Ukuvuma ngokugcwele iqiniso lobuhlobo lobugebengu kuzokunika ithemba lokubhekana nalo. Kuze kube manje, kunezinhlangano eziningi umsebenzi wazo ohlose ukulwa neqiniso lokuba khona kobudlova emndenini. Kulezi zikhungo uzonikezwa lonke ulwazi oludingekile, luzohlinzeka ngosizo lwengqondo futhi uchaze ukuthi ungenzani ezimweni ezinjalo. Ungesabi ukuxhumana namaphoyisa, nezinye izimo ezivikela amalungelo abantu.
Enye indlela yokugwema ubudlova akuyona ukuyithukuthelisa. Uma wazi izizathu zokuthi kungani umdlwenguli angase angazibambeli, zigweme, futhi ungavumeli ukuqhuma okunjalo futhi uzame ukuhamba okwesikhashana uma isimo sesikude kakhulu.
Uhlamvu lwama-hysterical kubantu besifazane
Umuntu angakwazi ukuxazulula izinkinga zomhlaba wonke, kodwa akanalo isikhathi esanele
Umhawu uchitha ubuhlobo
Umfana uyangihlambalaza, kodwa akavumeli ukuhamba, ngani?
Ingabe ubungane besifazane buyinganekwane noma yiqiniso?
Abazali bami banginikela endaweni yokukhosela
Ukuba owesifazane - kuyini?
Isobho nge-sorrel neqanda
Amazambane anobhontshisi kanye nengulube ne-ushizi-isanqante yokugqoka
Ukuchazwa kwamaphupho: kwenzekani ngengozi
Ingabe kukhona ubudlelwane bangempela emhlabeni wezwe?
Penne nge-trout ebhemayo
Okungcono: ipensela noma isisekelo samasking
UDanila Kozlovski wanquma ukubonisa u-Elizabeth Boyarsky uthando lwakhe
I-allergies ithinta kanjani ingane ngesikhathi sokukhulelwa?
Kusho ukukhonkwane kwezipikili ekhaya
Ukwenyuka kwe-anti-aging: imithetho yohlelo lokusebenza
Colic esiswini somntwana osanda kuzalwa
Ukuqothulwa kwamakhemikhali nokuzala komama
Amawele we-Horoscope, unyaka wonke
Ufuna ukwazi ngokwakho, ukudansa amadansa aseMpumalanga
Unyaka omusha wase-Chinese: unyaka wakhe, uma uqala, izimpawu